Mareykanka iyo Midowga Yurub waxay ka digayaan in ciidamada Eritrea oo cusub la geeyo gobalka Tigray -ga ee Itoobiya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Mareykanka iyo Midowga Yurub waxay ka digayaan in ciidamada Eritrea oo cusub...
Mareykanka iyo Midowga Yurub waxay ka digayaan in ciidamada Eritrea oo cusub la geeyo gobalka Tigray -ga ee Itoobiya
Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa qeylo dhaan ka diraya ciidammo dhawaan ka yimid Eritrea oo la geeyay gobolka Tigray ee Itoobiya, halkaas oo sagaal bilood oo dagaal ay ku dhinteen kumanaan qof ayna ka dhasheen dhibaato bani’aadannimo oo ka sii dartay.
Xoogag ka tirsan jabhadda Tigreega ee Itoobiya ayaa dib u qabsaday dhul badan bishii Juun, taas oo dhabar jab weyn ku noqotay dawladda Itoobiya. Laakiin soo galida ciidamada cusub ee Eritrea, oo timid bilo ka dib markii Itoobiya ay sheegtay in ciidamada shisheeye ay baxayaan, ayaa kor u qaadeysa rajada dagaal
“Mareykanka wuxuu ka walaacsan yahay in tiro badan oo ah (Ciidamada Difaaca Eritrea) ay dib u galeen Itoobiya kadib markii ay ka baxeen bishii June,” ayuu yiri Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Antony Blinken oo Isniintii war ka soo saaray.
Hadalladaas ayaa yimid markii Waaxda Maaliyadda ay ku dhawaaqday cunaqabateyn lagu soo rogay sarkaal sare oo Eriteriya ah oo ku eedeysan xadgudubyada xuquuqda aadanaha intii uu socday dagaalkii Tigray. Eritrea waxay sheegtay in eedeymahaasi yihiin kuwo aan sal iyo raad lahayn.
Dhanka kale, diblomaasiyiinta Midowga Yurub, ayaa 20 -kii bishii Ogosto qoraal gudaha ah ku qoray in Eritrea ay xoojin u dirayso xadka Tigray.
Dukumentiga, oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters, ayaa lagu sheegay in ciidamada Eritrea ay u guureen galbeedka Tigray oo markii horeba aad u militariga ahaa oo ay ku hardamayeen waxayna “qabsadeen goobo difaac ah oo ay ku jiraan taangiyo iyo madaafiic” hareeraha magaalooyinka Adi Goshu iyo Humera.
Waxa kale oo ay sheegtay in ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu booqday caasimadda Eritrea ee Asmara 17 -kii bishii Ogosto, booqashadaas oo aan xafiiskiisu shaacin, isagoo ku sii jeeday kulan rasmi ah oo ka dhacay Turkiga.
Afhayeennada wasaaradda warfaafinta Eritrea, ra’iisul wasaaraha Itoobiya iyo milateriga Itoobiya ayaan isla markiiba ka jawaabin codsiyada faallooyinka.
Dagaal ayaa sanadkii hore dhex maray dowladda federaalka Itoobiya iyo Jabhadda Xoreynta Dadka Tigrayga (TPLF) oo maamusha gobolka Tigray, waxaana tan iyo markaas in ka badan laba milyan oo qof lagu qasbay inay ka qaxaan guryahooda.
Ciidamada Eritrea ayaa galay Tigray si ay uga barbar dagaallamaan ciidamada federaalka iskahorimaadka oo ay ka muuqato xadgudubyo, oo ay ku jiraan kufsi, sida lagu sheegay baaritaanno ay sameeyeen Qaramada Midoobay iyo kooxaha xuquuqda.
Dowladda Itoobiya ayaa bishii April sheegtay in ciidamada Eritrea ay bilaabeen inay ka baxaan
Previous articleUrurka daalibaan waa urur Nooceeya?
Next articleQof Falastiini ah oo ku dhaawacmay iska hor imaad ay la galeen ciidamada Israa’iil xadka Gaza